देशका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर बनेको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ को महासचिव बन्ने अवसर विष्णु पौडेलले पाएका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीमा महासचिव पदलाई शक्तिशाली र भावी नेतृत्वको रूपमा हेर्ने गरिन्छ ।
साबिकको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको सञ्चालन ९ सदस्यीय ‘हाइकमाण्ड’ ले गर्नेछ । सचिवालयमा रहेका ९ जनामध्ये अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपछि पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पौडेलको हुनेछ ।
एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय र दुई ठूला पार्टीको तल्लो तहसम्मको समायोजन गर्नका लागि महासचिवको भूमिका मुख्य हुनेछ ।
महासचिवमा पौडेलको चयनले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व अब बिस्तारै दोस्रो पुस्तामा जाने संकेत पनि गरेको छ ।
सधैं मिलाउने प्रयास
२०७० सालको निर्वाचनपछि दोस्रो संविधानसभा गठन भयो । त्यस अन्तर्गतको संविधान अभिलेख, अध्ययन तथा निर्क्यौल समितिको सभापति बनेका थिए विष्णु पौडेल । अन्य समिति अलमलमा रहेको समयमा सबैभन्दा पहिला प्रतिवेदन बुझाउने काम पौडेलले नै गरेका थिए ।
२०६४ सालको चैतमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि गठित संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदमा सहमतीय कि बहुमतीय प्रणालीको सरकार भन्नेमा लामो बहस भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीलाई सत्ता हस्तान्तरणमा आनाकानी गरे ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीले खेलेको कच्चा खेलका कारण ऊ एक्लिएको थियो । माओवादीले एमालेलाई पटक–पटक झुक्याएको थियो । तैपनि एमालेको समर्थनमा माओवादी नेतृत्वको सरकार बनेरै छाड्यो । जानकारहरूका अनुसार त्यसको खास योजनाकार थिए विष्णु पौडेल ।
प्रचण्ड सरकारमा पौडेलले ऊर्जामन्त्री बनेर काम गरे । त्यही समयदेखि प्रचण्ड र पौडेलबीच शुरु भएको घनिष्ठताले दुई पार्टीलाई एक बनाउने तहमा ल्याइपुर्‍याएको विश्लेषण गरिन्छ । अर्थात् दुई पार्टीलाई मिलाउन पौडेलले मुख्य भूमिका खेले ।
पार्टी एकताका सूत्रधार
गत वर्ष २०७४ मंसिर २१ गते केन्द्र र प्रदेशका चुनाव सम्पन्न भए । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई चुनावी गठबन्धनको तहसम्म ल्याइपुर्‍याउन पौडेलले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरे ।
चुनावपछि एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरणमा प्रश्न उठिरहेको थियो । तर पौडेल भने आश्वस्त थिए । पुस २१ गते लोकान्तर डट्कमसँगको एक अन्तर्वार्तामा पौडेलले भनेका थिए – ‘पार्टी एकता २४ या ४८ घण्टामा सकिने विषय होइन, नेतृत्वमा समस्या छैन ।’
पार्टी एकताका लागि एमालेबाट वामदेव गौतम र पौडेल तथा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र जनार्दन शर्मा सक्रिय थिए । त्यसमा पनि मुख्यतः पौडेलले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले बताउने गरेका छन् । पौडेलपछि शर्माको भूमिका उल्लेख्य रहेको बताइन्छ ।
नयाँ पार्टीका महासचिव पौडेल साबिकको एमालेमा उपमहासचिव थिए ।
पार्टीमा सबैको प्यारो
नेकपा एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलनमा पौडेल जहिले पनि निर्णायक रहे । पार्टीको नवौं महाधिवेशनमा पौडेललाई महासचिवको उम्मेदवार बनाएर माधवकुमार नेपाल समूहले आफ्नो पक्षमा तान्न खोजेको थियो । तर पौडेलले ओलीलाई छाडेनन् ।
ओली समूहबाट महाधिवेशनमा उपमहासचिव लडेपनि यसबीचमा पार्टीमा सन्तुलन मिलाउने काम पनि पौडेलले गरे । पछिल्लो समयमा माओवादीसँगको पार्टी एकताका लागि ओली र माधव नेपालबीच सन्तुलन मिलाउने काममा पनि पौडेल नै सक्रिय रहे ।
लेखाइ र प्रविधिमा अब्बल
राजनीतिक पार्टीका प्रायः नेताहरू अध्ययन, लेखन र प्रविधिमा रुचि राख्दैनन् । रुचि राखेपनि मिहिनेत गर्दैनन् । विष्णु पौडेल यी मामिलामा अपवाद हुन् । पार्टीका रणनीतिक योजनादेखि समृद्धिका सपनासम्मका दस्तावेज लेखनमा उनी आफैं खट्छन् । शीर्ष नेताहरूका बीचका कुनै कुनै वार्तामा आउँदो बैठकमा लिखित दस्तावेजसहित बसौं न त भन्ने सहमति हुन्छ । अर्को बैठकमा पार्टी नेताहरूको भेट हुन्छ ।
प्रायः अन्य नेता चर्को स्वरमा आफ्नो भनाइ राखेर जबर्जस्त आफूतिर ध्यान तान्न खोज्छन् । तर पौडेल यस्ता पात्र हुन् जसले लिखित आवश्यक परेका बखत दस्तावेज पेश गर्छन् र अरूका प्रस्तुतिलाई फिक्का तुल्याइदिन्छन् । उसो त पौडेल आफैं कम्प्युटर टाइप गर्छन् । उनको साथमा ल्यापटप प्रायः टुट्दैन । कुनै कुनै बैठकमा त उनले ल्यापटपमै ‘टिपोट’ गर्ने गरेको पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरूबीच चर्चा हुने गर्छ ।
भूगोलसँग गाढा साइनो
पार्टीका प्रायः नेता भौगोलिक हिसाबले विकट मानिने स्थानमा खटिन रुचाउँदैनन् या आनाकानी गर्छन् । यो मामिलामा पनि पौडेल अपवाद छन् । भूगोल अर्थात् पार्टीले खटाएको कार्यक्षेत्रमा खटिने मामिलामा पौडेल अन्य नेताभन्दा अग्रपंक्तिमा पर्छन् । त्यो उनको पुरानो बानी पनि हो ।
२०४८ सालमा पार्टीका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले पौडेललाई महाकाली अञ्चलको इन्चार्ज बनाएर खटाएका थिए । पौडेलको गतिशीलता, सक्रियता र नेतृत्व क्षमता बुझेरै भण्डारीले उनलाई महाकाली अञ्चल इन्चार्जको जिम्मा दिएको विश्लेषण गरिन्छ । महाकाली अञ्चलको इन्चार्ज भएर खटिँदा पौडेल जम्मा ३२ वर्षका थिए ।
रोचक के भने २०४८ सालमा पौडेल जहाँ खटिए, त्यहाँ नेपाली काँग्रेसको दबदबा थियो । महाकालीको १९ मध्ये १८ वटा क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेसले जितेको थियो । त्यो परिस्थितिमा पनि पौडेलले उक्त कार्यक्षेत्रमा खटिन कुनै आनाकानी गरेनन् । उनी इन्चार्ज भएर गएपछि त्यहाँको पार्टी संगठन सुधारमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको पार्टीभित्रै चर्चा हुन्छ ।
स्याङ्जाबाट बुटवल झरेका पौडेल आफ्नो भूगोलसँग सधैं नजिक रहेर काम गर्छन् । उनले लुम्बिनी अञ्चल इन्चार्ज, पश्चिमाञ्चल इन्चार्ज लगायतका भूमिका निभाइसकेका छन् । दिइएका भूमिकामा खरो उत्रेर पौडेलले नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने सन्देश पार्टीमा स्थापित गराउँदै आएका थिए ।
जनआन्दोलन उठाए, उत्कृष्ट बजेट ल्याए
२०६२/०६३ कोे जनआन्दोलनमा शुरुका दिनमा दलहरूले जनता सडकमा उतार्न सक्लान् ? या नेताको कुरा सुनेर जनता तत्कालीन राजाको कदमविरुद्ध सकडमा आउलान् ? भन्ने ठूलो अन्योल थियो । जताततै व्याप्त उक्त अड्कलबाजीलाई फिक्का तुल्याइदिने काममा पनि पौडेलले नजिरयोग्य भूमिका खेले । उनै पौडेलको नेतृत्वमा २०६२ साल मंसिर ४ गते लुम्बिनीमा राजाको कदमका विरुद्ध ‘जनसागर’ सडकमा ओर्लेको थियो । राजाको कदमविरुद्ध उत्रेको त्यो पहिलो मानवसागर थियो ।
लुम्बिनीको त्यो जनसागरले जनता राजाको कदमसँग खुशी छैनन्, जनता दलहरूकै साथमा छन् भन्ने ठूलो सन्देश प्रवाह गर्‍यो । लुम्बिनीपछि अन्यत्र जहाँ–जहाँ राजाविरोधी आन्दोलन भए, त्यहाँ जनताको व्यापक सहभागिता रह्यो र जस लुम्बिनीले पाइरह्यो । लोकतन्त्रको पक्षमा आन्दोलनलाई उठान गर्न पौडेल पछि देशैभर सक्रिय रहे । २०६२/०६३ को आन्दोलनमा पौडेलले लिएको नेतृत्वदायी भूमिकालाई यस अर्थमा पार्टीभित्र महत्त्वका साथ हेर्ने गरेको पाइन्छ ।
केपी शर्मा ओली २०७२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पौडेलले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । उनी अर्थमन्त्री भएपछि मुलुकको अर्थतन्त्र कता जाला, कस्तो असर पर्ला भनेर थुप्रै अड्कलबाजी काटिए । तर पौडेलले जुन बजेट ल्याए, त्यसको चौतर्फी प्रशंसा भयो । २०५१ सालपछि लोकप्रिय बजेट ल्याएको भनेर पौडेलको प्रशंसा एकाएक चुलियो ।
अनेकौं आशंका र अड्कलकाजीबीच पौडेलले उत्कृष्ट बजेट ल्याएको अर्थशास्त्रीहरूले नै विश्लेषण गरे । उक्त बजेटमा ठूला परियोजनालाई महत्त्वका साथ प्रस्तुत गरिएको थियो र ती योजनाले आज पनि निरन्तरता पाइरहेका छन् । पछिसम्म निरन्तरता पाइरहने दिशामा छन् । पौडेलले विकास र योजनाका बारेमा छलफल गर्दा ठूलो र दीर्घकालीन सोचका साथ विश्लेषण र समीक्षा गर्ने अनि त्यहीअनुसारको रणनीति निर्माणमा जोड दिने गरेको उनीसँग काम गरेका प्रशासकहरू बताउँछन् ।
निर्वाचन क्षेत्रमा नमूना विकास
पछिल्ला तीनवटा निर्वाचनमा लगातार चुनाव जित्ने नेतामध्ये पर्छन् विष्णु पौडेल । २०६४ सालको चुनावमा एमालेले निराशाजनक पराजय बेहोर्दा पौडेलले लुम्बिनी अञ्चलमा एमालेको शाख जोगाएका थिए ।
२०७० सालको संविधानसभा चुनावमा त्यतिबेलाका ‘शक्तिशाली’ माओवादीका दोस्रो वरीयताका नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई चुनावमा पराजित गरेपछि पौडेलको राजनीतिक उचाइ झनै बढ्यो । बाबुरामसँग चुनाव लड्न अप्ठेरो हुने भन्दै पौडेललाई निर्वाचन क्षेत्र फेर्न कार्यकर्ताले सुझाव दिएका थिए । तर पौडेलले रूपन्देही २ नै रोजे र भट्टराईलाई पछारे ।
पौडेलले चुनाव जित्नुमा निर्वाचन क्षेत्रमा उनले पुर्‍याएको योगदान मुख्य कारण हो भनेर विश्लेषण गरिन्छ । तराईका शहरमध्ये बुटवल अहिले नेपालको पहिलो शहर बन्न पुगेको छ । बुटवल–भैरहवा सडक विस्तार लगायत सडक र सिँचाइमा रूपन्देहीले फड्को मारेको छ ।
२०७४ सालको चुनावमा विजयी हुन उनलाई अप्ठ्यारो थिएन । बुटवलमा बसेर उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा पाँच नम्बर प्रदेशका अन्य निर्वाचन क्षेत्रको चुनावी रणनीति बनाएका थिए ।
कम बोल्ने, काम फत्ते गर्ने
पौडेलमाथि लाग्ने गरेको एउटा आरोप हो– उनी कम बोल्छन् । खुल्दैनन् । के गर्छन्, पत्तो पाइँदैन । यी आरोप पौडेल स्वयं स्वीकार गर्छन् । कुरा बढी, काम कम हुने हाम्रो समाजमा कतिपयलाई पौडेलको स्वभाव मन पर्छ । कतिपयलाई भने ठीक लाग्दैन ।
पौडेललाई नजिकबाट चिन्नेहरूले चाहिँ उनलाई “म्यान अफ् एक्सन” भनेर बुझ्छन् । अर्थात् कुरा कम गर्ने, काम फत्ते गरेर देखाउने नेताका रूपमा पौडेललाई लिने गरिन्छ ।
आफूभन्दा वरिष्ठ नेतालाई आवश्यक आदर र सम्मान गर्नेमा पौडेल अगाडि छन् । उनी आफ्ना कुरा तर्कपूर्ण ढंगले प्रस्तुत गर्ने तर शिष्टाचार नभुल्ने अनुशासित र शालीन नेताका रूपमा परिचित छन् ।
समकालीन नेताहरूको बीचमा सबै हिसाबले असल छवि वनाएका पौडेलले शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवको पदीय दायित्व र भूमिकालाई नजिरयोग्य बनाउन थप मिहिनेत पक्कै गर्नुपर्नेछ ।
जेठ ४, २०७५ मा प्रकाशित
गौतम लोकान्तरका सम्पादक हुन् । दुई दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय उनी खोजमूलक समाचारमा दखल राख्छन् ।
कर्णाली प्राविधि शिक्षालयले कर्मचारी माग्यो (सूचनासहित) काठमाडौं- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्लाले विभिन्न पदमा दर्खास्त आह्वान गरेको छ । फरेष्ट्रिक प्रशिक्षक, सहायक लेक्चर फिजिक्स, निर्माण शिक्षक लगा...